प्रचण्ड र माधवलाई जेल हाल्ने योजनामा ओली ! -
July 6, 2020 July 6, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on प्रचण्ड र माधवलाई जेल हाल्ने योजनामा ओली !
काठमाडौँ २२ असार । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओलीका विरुद्ध यतिबेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायतका नेता उभिएका छन् ।
स्थायी कमिटी बैठकमा उनीहरूले ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब दिएपछि बैठक नै प्रभावित छ । बैठक छाडेर आपसी सहमति गराउन जुटेका नेता एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफलमा छन् । कहिले अध्यक्षद्वय त कहिले अन्य नेताहरू गुटगत र समूहगत रूपमा भेला भएर गतिरोध समाप्त पार्न छलफलमा छन् । छलफलमा जुट्दा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने अचेल गज्जबका तर्क छन् ।
फोन गरेर सुझाव दिनेलाई पनि उनी आफूलाई ओलीले थुन्न खोजेको कुरा सबैभन्दा पहिला सुनाउँछन् । ‘धेरै जिल्लाका नेताहरूलाई पनि माधव नेपाल आफैँले फोन गरेर मलाई ओलीजीले थुन्न लागेको भन्ने खबर गरिरहनुभएको छ’, एक जिल्ला नेताले बताउँछन् । उनले आफ्नो कुरा मात्र गर्दैनन्, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि ओलीले थुन्ने योजना बनाएको सुनाउन पनि छुटाउँदैनन् । ‘मलाई मात्र होइन, शिविर घोटाला र युद्ध अपराधको मुद्दामा पनि प्रचण्डलाई थुन्न खोजका छन् ।’
समानुपातिक सांसदलाई भूमिका नदिएपछि कांग्रेस सांसदले संसद बैठकमै च्यातिन् नियमावली
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आकस्मिक बैठक
अमेरिका पुगेका प्रचण्डलाई आतंककारी आएको भन्दै अमेरिकाको अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दर्ता
‘मधेशमा नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन सक्ने छ’- कपलेश्वर यादव
January 4, 2018 अखवार अनलाइन